Soo dejisan FrostWire 6.8.4 – Windows – Vessoft
Qaybaha: Torrent, Downloadees
Bogga rasmiga ah: FrostWire
FrostWire – software ah inaad kala soo baxdo iyo faylasha sarrifka ee network BitTorrent ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka raadin iyo soo bixi files adeegyada caanka ah sida YouTube, SoundCloud, yify-torrent, TPB, Eztv iwm FrostWire ka kooban yahay ciyaaryahan dhisay-in, taasoo keeneysa inuu u ciyaaro audio iyo video files degsan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan maktabadda faylasha, wareejiso content in telefoonada gacanta ama kiniin iyo isgaadhsiin in wadahadal uu la users kale. FrostWire sidoo kale waxaa ku jira tiro badan oo ah qalab si ay u dejiyaan shaqada ku haboon iyo wax soo saar leh ee software-ka.
Waxaa la dhisay-in ciyaaryahan oo chat
Soo dejisan FrostWire
Faallo ku saabsan FrostWire
FrostWire Xirfadaha la xiriira
2GIS – tusiye leh khariidad magaalo oo faahfaahsan, macluumaadka lala xiriirayo dhammaan ururada iyo jidadka gaadiidka dadweynaha.
Inkscape – tifaftire garaafyo leh shaqooyin badan oo hawleed. Software-ka wuxuu ku taageeraa shaqada mashruucyo sahlan ama qalafsan waxuuna awood u siinayaa inuu ku keydiyo qaabab kala duwan.